कसरी YouTube भिडियोहरू र संगीत डाउनलोड गर्ने ग्याजेट समाचार
यो अविश्वसनीय देखिन्छ, तर यो लगभग ११ बर्ष पछि भएको छ YouTube यसको पहिलो कदम चाल्न सुरु भयो। छोटो समयमा, भिडियो प्लेटफर्म, अब गुगल कम्पनी, यस प्रकारको अडियोभिजुअल सामग्रीको लागि सन्दर्भ भयो। यसको महत्त्व यस्तो छ कि यो YouTube मा टेलिभिजन भिडियोहरू राख्नुबाट ठीक उल्टो गर्न, युट्युब भिडियोहरू टेलिभिजनमा राख्नु, समाचारमा पनि, जुन चाँडै नै भनिएको छ। २०१ 2016 मा नै, हामीले इन्टरनेटमा खोज्ने धेरैजसो श्काको यस वेबसाइटको बारेमा भिडियो वेबसाइटमा समाधान छ। तर, यदि हामीले हाम्रो मनपराएको भिडियो फेला पार्‍यौं भने, के यसलाई इन्टर्नेट जडान प्रयोग गरेर ब्राउजरबाट पुनः प्ले गर्नु आवश्यक छ? भाग्य छैन।
यो धेरै तार्किक कुरा हो जुन कहिलेकाँही हामी चाहान्छौं भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस् ताकि तपाईं यसलाई फेरि अफलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, मैले गितारमा केहि गीतहरू कसरी खेल्ने भन्ने बारे ट्यूटोरियलहरू डाउनलोड गरेको छु। मलाई साँच्चिकै संगीतको शैली मनपर्दछ जुन कानबाट प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ वा यसको स्कोरहरू पनि, त्यसैले कहिलेकाँही म यूट्यूबमा कसरी प्ले गर्ने भनेर हेर्छु। जब मलाई डेमो भेट्छ जसले मलाई सन्तुष्ट पार्छ, म सेकन्डको लागि भिडियो डाउनलोड गर्न मेरो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सक्दिन जब सम्म कम्तिमा पनि मैले गीत सिक्दिन। यदि, म जस्तो तपाईको इच्छा गुगल भिडियो प्लेटफर्मबाट भिडियो डाउनलोड गर्न सक्षम हुनु हो, पढ्न जारी राख्नुहोस् किनकि हामी सबै सम्भावित तरिकाहरू, जुन मोबाइल यन्त्रहरूबाट समावेश गरिएको छ र भिडियोहरूको अडियो मात्र डाउनलोड गर्ने प्रयास गर्दछौं।
1 YouTube भिडियो डाउनलोड गर्न डेस्कटप प्रोग्रामहरू
1.1 aTube क्याचर
1.3 MP3 होइन
1.4 किगो भिडियो कन्भर्टर
2 एन्ड्रोइडबाट यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
2.1 एक ब्राउजर बाट
2.2 यूट्यूब डाउनलोडरको साथ
2.3 र रीमिक्स ओएसको साथ?
3 IOS बाट यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
3.1 टर्बो डाउनलोडरको साथ
3.2 कार्यप्रवाहको साथ
3.2.1 वैकल्पिक विधि
4 ब्राउजरबाट यूट्यूब भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने
4.1 एसएस थप्नको विधि
4.2 अन्य समान विधिहरू
5 पूर्ण HD वा KK मा कसरी YouTube भिडियो डाउनलोड गर्ने
5.1 4K भिडियो डाउनलोडरको साथ
5.2 4K मा यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्दै
6 .Ii ढाँचामा सिधा YouTube भिडियो डाउनलोड गर्ने
6.1 Youtube.com को अगाडि "lataa" थप्दै
7 एक YouTube भिडियो बाट एक एमपी3डाउनलोड गर्न को लागी
7.1 VidToMP3 को साथ
YouTube भिडियो डाउनलोड गर्न डेस्कटप प्रोग्रामहरू
एक विकल्प जुन मेरो भाईले सँधै सिफारिस गर्दछ aTube क्याचर, एक नि: शुल्क अनुप्रयोग विन्डोजहरूको लागि त्यो तपाइँलाई दुबै भिडियो र संगीत डाउनलोड गर्न को लागी YouTube र अन्य वेब पृष्ठहरु लाई अनुमति दिन्छ। ATube क्याचरको बारेमा राम्रो कुरा यसको बहुमुखी प्रतिभा हो, जसले हामीलाई फाइलहरू अन्य ढाँचाहरूमा रूपान्तरण गर्न, र यसको प्रयोगमा सजिलो पार्दछ। यस अनुप्रयोगको साथ युट्यूब सामग्री डाउनलोड गर्न, हामी कुनै पनि ब्राउजरको साथ वेबमा जानुपर्नेछ र भिडियोको युआरएल प्रतिलिपि गर्नुपर्नेछ। पछि हामी निम्न चरणहरू पूरा गर्दछौं:
हामीले लिंक टाँस्यौं सम्वाद बाकसमा तस्विरमा देखाइएको छ।
हामी "मा क्लिक गर्दछौंडाउनलोड गर्नुहोस्"। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो हामीलाई विकल्प को एक राम्रो मुट्ठी प्रदान गर्दछ।
हामी भिडियो वा अडियो विकल्पहरू मध्ये एक छनौट गर्छौं, हामी सबै भिडियो डाउनलोड गर्न चाहन्छौं वा केवल संगीत।
यद्यपि मैले यस विकल्पमा टिप्पणी गरेको छु, मैले स्वीकार्नु पर्दछ कि यो मेरो मनपर्ने होइन। यो सत्य हो कि aTube क्याचर एक उत्कृष्ट प्रोग्राम हो, तर म प्राय जसो विन्डोज प्रयोग गर्दिनँ न त मलाई धेरै अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्ने अनुप्रयोग चाहिन्छ। तपाईंले पछि देख्नुहुनेछ, त्यहाँ धेरै सरल विकल्पहरू छन् जुन यसका साथै हामी कुनै पनि अपरेटि operating प्रणालीमा प्रयोग गर्न सक्दछौं, जबसम्म हामी कुनै ब्राउजर प्रयोग गर्छौं जसले इन्टरनेटबाट फाइलहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
एक अनुप्रयोग जसमा यसको नाम "डाउनलोडकर्ता" शब्द समावेश छ हाम्रो लागि काम गर्नुपर्दछ, हैन? खैर यो गर्छ। को राम्रो JDownloader के हामीले यो कम्प्युटरमा स्थापित गर्यौं कि सबै प्रकारका धेरै अन्य डाउनलोडहरू प्रदर्शन गर्न, त्यसैले हामीले यूट्यूबबाट भिडियोहरू वा संगीत डाउनलोड गर्न सफ्टवेयर स्थापना गर्नुपर्दैन।
JDownloader को बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो सबै चीज लगभग स्वचालित रूपमा गर्दछ। मँ "करीव" भन्छु किनकि तार्किक रूपमा हामीले यो भन्नुपर्नेछ कि हामी कुन फाईल वेब पेजबाट डाउनलोड गर्न चाहन्छौं वा यसले धेरै फोहोर डाउनलोड गर्न सक्छ। जेडडाउनलोडरसँग युट्यूबबाट भिडियो वा संगीत डाउनलोड गर्न, हामीले भर्खर भिडियोको यूआरएल प्रतिलिपि गर्नुपर्नेछ र यो कार्यक्रममा विचाराधिन कार्यको रूपमा थपिने छ केही अरू नगरी।
यदि हामीसँग यो खोलिएको छ भने, हामीले युआरएल प्रतिलिपि गर्ने बित्तिकै हामी एउटा सानो विन्डो देख्नेछौं जुन चेतावनी दिन्छ कि यो जेडडाउनलोडरमा पनि प्रतिलिपि गरिएको छ। तर, यो प्रोग्राम खोल्ने बित्तिकै यो थपिने छ। तपाइँलाई भ्रमित नपार्नका लागि, म JDownloader को साथ YouTube बाट भिडियोहरू वा संगीत डाउनलोड गर्नका लागि निम्न चरणहरू विस्तृत रूपमा राख्छु:
हामी खोल्छौं JDownloader (यो यस तरीकाले सुरू गर्न आवश्यक छैन, तर यो म यो कसरी गर्छु)।
हाम्रो वेब ब्राउजरमा, भिडियोमा जाऔं हामी डाउनलोड गर्न चाहन्छौं।
हामी युआरएलको प्रतिलिपि गर्छौं ठेगाना बक्सबाट। यो JDownloader मा स्वचालित रूपमा प्रतिलिपि हुनेछ।
अब आउनुहोस् JDownloader.
यदि यो स्वचालित रूपमा खोलिएको छैन भने सेक्सनमा जानुहोस् लिंक ग्रब्बर.
हामी यसमा क्लिक गर्दछौं प्लस प्रतीक (+)
यहाँ तपाइँले अघिल्लो छविमा देख्नु भएको जस्तो केहि चीज देखा पर्दछ। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ धेरै भिडियो र अडियो विकल्पहरू छन्। हामी आफूले चाहेको कुरा छनौट गर्दछौं।
हामी इच्छित फाइलमा दायाँ क्लिक गर्छौं र चयन गर्दछौं डाउनलोड गर्नुहोस् र थप्नुहोस्.
हामी कुर्दछौं र यसलाई डाउनलोड फोल्डरमा डाउनलोड गरिनेछ।
यदि मैले युट्यूबबाट सामग्री डाउनलोड गर्नका लागि प्रोग्राम छनौट गर्नुपर्‍यो भने, म जेडाउनलोडर छान्छु। यो मेरो मनपर्ने होईन, तर यो दुबैमा उपलब्ध छ विन्डोज, म्याक र लिनक्स को लागी (वास्तवमा क्याप्चर उबुन्टुबाट हो)। अर्को मल्टि-प्लेटफर्म अनुप्रयोग जसले तपाईंलाई चासो लाग्न सक्छ 4k भिडियो डाउनलोडर हो, तर हामी त्यस बारे सेक्सन 4K भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने सेक्सनमा कुरा गर्नेछौं।
NotMP3 YouTube डाउनलोडर लोकप्रिय भिडियोहरू र अडियो लोकप्रिय र उच्च-गुणवत्ता ढाँचामा डाउनलोड गर्न एक उत्तम अनुप्रयोग हो। यो कार्यक्रम एक सजीलो गर्न को लागी प्रयोग डिजाइन र महान कार्यक्षमता को संयोजन। यो एकैचोटि धेरै उद्देश्यहरू गर्दछ: MP4, WMV, WEBM र MP3 ढाँचामा भिडियोहरू डाउनलोड र रूपान्तरण गर्नुहोस् जुन तपाईं कुनै पनि रिजोलुसनको साथ choose 360०p बाट p२०p र १p०p HD वा २K / 720K / 1080K UltraHD मा छान्नुहुन्छ।
किगो भिडियो कन्भर्टर
किगो भिडियो कन्भर्टर यो यस्तो प्रोग्राम हो जुन मलाई धेरै मनपर्दछ कि म यो कसरी निःशुल्क हो भनेर धेरै बुझ्न सक्दिन। मैले यो मेरो कम्प्युटरमा युट्यूबबाट भिडियोहरू वा संगीत डाउनलोड गर्न स्थापना गरेको छैन, तर भिडियोहरूलाई अर्को ढाँचामा रूपान्तरण गर्न यो राम्रो विकल्प हो। तर यसले गुगल भिडियो वेबसाइटबाट सामग्री डाउनलोड गर्न पनि मद्दत गर्दछ, त्यसैले गर्दा मैले यसलाई लेखमा समावेश गर्दछु।
यस प्रोग्रामको साथ युट्यूबबाट सामग्री डाउनलोड गर्न धेरै सरल छ, सबै चीजहरू जस्तै। हामीले केवल तल विस्तृत चरणहरू प्रदर्शन गर्नुपर्दछ:
यद्यपि यो क्याप्चरमा छैन, पहिलो चीज जहिले जहिले पनि हुन्छ url प्रतिलिपि गर्नुहोस् हाम्रो मनपर्ने वेब ब्राउजरबाट इच्छित भिडियो को।
हामी किगो भिडियो कन्भर्टर खोल्छौं र क्लिक गर्नुहोस् भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्.
त्यसपछि हामी क्लिक गर्दछौं URL थप्नुहोस्। हामी धेरै विकल्पहरू देखा पर्नेछौं। यो किनभने अनुप्रयोगले पनि अन्य ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्दछ।
हामी इच्छित विकल्प चयन गर्दछौं।
अन्तमा, हामी क्लिक गर्दछौं OK.
यदि हामी यो चाहन्छौं भने हामी विन्डोजमा url तान्न सक्छौं किगो भिडियो कन्भर्टर सामग्री पत्ता लगाउनको लागि। मलाई यो अनुप्रयोग साँच्चै मनपर्दछ र म यो सिफारिस गर्दछु।
एन्ड्रोइडबाट यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
एक ब्राउजर बाट
राम्रो (वा खराब, तपाइँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यसको आधारमा) Android के यो एक धेरै खुला प्रणाली हो। लगभग कुनै पनि ब्राउजर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटबाट चीजहरू र यसैले YouTube भिडियोहरू सिधा ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो एक सबैभन्दा प्रसिद्ध ब्राउजर र मेरो मनपर्ने को एक हो, के म तल वर्णन गर्न गइरहेको छु संग प्राप्त भयो फायरफक्स, तर यसले पक्कै पनि गुगलको क्रोमसँग काम गर्दछ। ब्राउजर विधिहरूको, म एक नयाँ व्याख्या गर्न जाँदैछु जसले URL मा "youtube" अगाडि "dlv" अक्षरहरू थप्न प्रयास गर्दछ। हामी यसलाई निम्न अनुसार गर्नेछौं:
हामी इन्टरनेट ब्राउजर खोल्छौं। यस अवस्थामा फायरफक्स।
हामी डाउनलोड गर्न चाहेको भिडियोमा जान्छौं।
यदि हामी यूट्यूबको मोबाइल संस्करणमा छौं भने हामीले "m" लाई "www" मा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ र अवधि पछि ("youtube" अगाडि) अक्षरहरु "dlv" थप्नु पर्छ, तपाईले निम्न चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ:
हामी गो वा इन्टर मा छुन्छौं र यसले हामीलाई नयाँ पृष्ठमा लग्नेछ, इच्छित भिडियो डाउनलोड गर्नका लागि तयार।
हामी ड्रप-डाउन मा छुन्छौं र कुन भिडियो ढाँचामा हामी भिडियो डाउनलोड गर्न चाहन्छौं भनेर छान्छौं।
अर्को, हामी फाईल बचत गर्न चाहन्छौं, हामी डाउनलोड छनौट गर्दछौं।
हामी डाउनलोड समाप्त हुनका लागि कुर्दछौं। हामी सूचनाहरूबाट हराइरहेको कुरा देख्न सक्दछौं (ट्विटर नोटिसहरू मेरो x को लागी होइन) मैले मेरो बुवाको घरमा जानु पर्छ र उहाँबाट ग्यालक्सी ट्याबbउधारो लिनुपर्‍यो)।
र अन्तमा, अब हामी भिडियो प्ले गर्न सक्छौं।
यूट्यूब डाउनलोडरको साथ
यद्यपि मलाई ब्राउजर विकल्पहरू राम्रो मनपर्दछ, त्यहाँ अन्य विकल्पहरू पनि छन् जुन अनुप्रयोगको रूपमा समान वा राम्रो छ। यूट्यूब डाउनलोडर एन्ड्रोइडका लागि उत्कृष्ट अनुप्रयोग हो जुन हामीलाई भिडियोहरू डाउनलोड गर्न र एक पटक डाउनलोड गरिएको अडियोलाई रूपान्तरण गर्न अनुमति दिनेछ। समस्या त्यो हो यो गुगल प्ले अनुप्रयोग स्टोरमा छैन, त्यसैले यदि तपाईं यो विधि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईं र केवल तपाईं के हुन सक्छ भनेर जिम्मेवार हुनुहुन्छ। जे भए पनि मैले यो ट्यूटोरियल सिर्जना गर्न आफै प्रयास गरेको छु, तर चेतावनी दिनु राम्रो हो र विपरित बाहेक केहि हुँदैन। YouTube डाउनलोडरमार्फत भिडियोहरू डाउनलोड गर्न हामी निम्न कार्य गर्दछौं:
हाम्रो एन्ड्रोइड उपकरणको साथ, हामी वेबमा जान्छौं dentex.github.io/apps/youtubedownloader/, हामी .apk डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्।
हामी युट्यूब डाउनलोडर खोल्छौं र भिडियोको लागि खोजी गर्दछौं जस्तो कि हामी कुनै अन्य अनुप्रयोगको साथ गर्दछौं।
एक मेनू उपलब्ध ढाँचा संग खुल्नेछ। हामी ती मध्ये एक छान्छौं।
हामी डाउनलोड पुष्टि गर्छौं।
हामी डाउनलोड समाप्त हुन र यसलाई खोल्नको लागि कुर्दछौं। जस्तो कि तपाई छविमा देख्न सक्नुहुन्छ, हामी फाईलबाट अडियो निकाल्न र यसलाई एमपी to मा रूपान्तरण गर्न सक्छौं।
र रमाइलो गर्न। खैर, चित्रमा एक अमरन्थेको एलिज राइड हो (मलाई यो दिन सबैभन्दा मनपर्ने ब्यान्डहरू मध्ये एक हो) र गीत "भोक।"
र रीमिक्स ओएसको साथ?
यदि तपाईं एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई सम्भवतः थाहा छ रीमिक्स ओएस। एन्ड्रोइडएक्स project project प्रोजेक्टमा आधारित, रीमिक्स ओएस उत्तम चीज हो जुन केहि कम्प्युटरहरूमा हुन सक्दछ, विशेष गरी कम संसाधन भएका व्यक्तिहरूसँग। सुरुमा उनीहरूले -२-बिट्ससँग मिल्दो संस्करण ल्याउन गइरहेका थिएनन, तर उनीहरूले पहिल्यै अनुमान लगाइसकेका छन् कि उनीहरूले त्यसो गरे भने हामी ती १० इन्च कम्प्युटरहरू मेटाउन सक्दछौं, ती गरिब सानाले अन्य अपरेटिंग प्रणालीहरूसँग लगभग तान्छन्, र कसैले Lubuntu संग जो एक छ बताउँछ।
तथ्य यो हो कि रीमिक्स ओएस पनि "एसएस विधि" बाट भिडियो डाउनलोड गर्न सक्षम छ (पछि वर्णन गरिएको छ र "dlv" थप्दै अघिल्लोसँग मिल्दोजुल्दो छ)। अहिले, अपरेटि system प्रणाली यसको प्रारम्भिक चरणमा छ, त्यसैले त्यहाँ केहि सरल छैन, तर यो प्रत्येक Android उपकरण द्वारा प्रयोग गरिएको कुनै पनि अन्य संस्करण जस्तै सक्षम छ। यस लेखमा हामी तपाईलाई Google Play स्टोरलाई कसरी रिमिक्स OS मा थप्ने भनेर देखाउन सक्दैनौं, तर हामी पहिले नै यो स्थापना भएको आधारमा शुरू गर्दछौं।
हालको रीमिक्स OS ब्राउजर धेरै सक्षम छैन, त्यसैले हामीले अर्को डाउनलोड गर्न आवश्यक पर्दछ। को फायरफक्स यो उत्तम रूपमा कार्य गर्दछ, निम्न स्क्रिनशटहरू शोको रूपमा।
रीमिक्स ओएसको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि यो त्यस्तो प्रणाली हो जुन अरू कुनै डेस्कटप प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ, त्यसैले हामीसँग फाइलहरू फाइल एक्सप्लोररमा प्रतीक्षा गरिरहेका भिडियोहरू हुनेछ, डाउनलोड फोल्डरमा। यदि तपाईंले अहिलेसम्म प्रयास गर्नुभएको छैन र तपाईंसँग कम-संसाधन कम्प्युटर छ भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाईंले यो प्रयास गर्नुहोस्।
IOS बाट यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि यो गर्न आवश्यक छ जेल तपाईंको आईओएस उपकरणमा युट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्न सक्षम हुन, तपाईं अधिक गलत हुन सक्नुहुन्न। यो सत्य हो कि अरू उपकरणहरू जस्तो कुनै सरल र सीधा तरीका छैन, तर यो गर्न सकिन्छ। धेरै मेहनत नगरीकन, म दुई अनुप्रयोगहरूको बारेमा सोच्न सक्छु र ती मध्ये एक पूर्णतया स्वतन्त्र छ यो लेख्ने समयमा। यो अनुप्रयोगको बारेमा हो टर्बो डाउनलोडर - फाईल प्रबन्धक र ब्राउजर (भ्रमबाट बच्न, म लिंक पछि थप्नेछु)।
टर्बो डाउनलोडरको साथ
यसका साथ युट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्न प्रक्रिया नि: शुल्क अनुप्रयोग यो सरल छ, तर तपाईंले मार्ग जान्नु आवश्यक छ। यहाँ आईओएस रीलमा भिडियोहरू बचत गर्नका लागि निम्न चरणहरू छन्:
तार्किक रूपमा, पहिलो चरण ई डाउनलोड गर्न हुनेछ अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि हामी अनुप्रयोग स्टोरमा अनुप्रयोगको लागि खोजी गर्न सक्दछौं, तर उत्तम कुरा यो हो कि तपाईं एक लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् जुन मैले तपाईंको iOS उपकरणबाट तल राख्नेछु। यसैले, मैले अघि भनें, हामी भ्रमबाट जोगिनेछौं र सही अनुप्रयोग स्थापना गर्नेछौं।
यदि हामीले सफारीको रूपमा अर्को अनुप्रयोगको साथ भिडियो पहुँच गर्यौं भने हामीले प्रतिलिपि गर्नुपर्नेछ र युआरएल टाँस्नुहोस् सम्बन्धित बक्समा, जो टर्बो डाउनलोडर युआरएलहरूको लागि बक्स बाहेक अरू कुनै होइन। यदि हामी चाहन्छौं भने हामी टर्बो डाउनलोडरमा यसमा नेभिगेट गर्न सक्दछौं जस्तो हामी कुनै अन्य ब्राउजरसँग गर्छौं।
तपाईं अघिल्लोको पहिलो स्क्रिनशटमा देख्न सक्नुहुन्छ, URL को छेउमा ए देखा पर्छ चट्या icon्ग आइकन नम्बर १ सहित। यसको मतलब त्यहाँ डाउनलोड गर्नका लागि एक भिडियो उपलब्ध छ। हामी त्यो किरण मा खेले। यदि यो देखा पर्दैन भने हामी विकल्पहरू पनि पहुँच गर्न सक्दछौं थिच्दै र समाएर भिडियो को बारेमा।
अर्को चरण एकतर्फी सडक हो। किनकि हामी अरू केहि गर्न सक्दैनौं, हामी निलो एरोले संकेत गरेको भिडियोमा छुन्छौं। एक मेनू देखा पर्नेछ।
तपाईले पहिल्यै अनुमान गरिसक्नु भएको छ, अब हामीले ट्याप गर्नु पर्छ डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईं एक निर्दिष्ट फोल्डर संकेत गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले अन्त्यमा इलिप्सिसको साथ विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ।
अब हामीसँग हाम्रो iOS उपकरणमा भिडियो छ, तर आश्चर्य! हामी यसलाई केवल टर्बो डाउनलोडरको साथ देख्न सक्छौं। यो हामी चाहदैनौं, त्यसैले यसले केहि थप चरणहरू लिनेछ। हामी डाउनलोड फाईलमा जान्छौं, हामी यसमा टच गर्दछौं तीन पोइन्ट र त्यसपछि हामी छुन्छौं शेयर.
चाल भनेको नोटमा भिडियो थप्नु हो यो हाम्रो रिलमा पछि बचत गर्नका लागि। यसैले हामी आइकनमा टच गर्दछौं टिप्पणीहरू.
त्यसोभए तपाईले आफूलाई जे उत्तम लाग्छ तपाईले राख्नुहुन्छ तर, यदि हामी यो विचार गर्छौं कि हामी के चाहन्छौं भने भिडियोलाई हाम्रो रिलमा सुरक्षित गर्नु हो, म एउटा चिठी वा केही पनि राख्दिन। केवल, हामी राख्छौं नोट
अर्को चरण, तपाईंले अन्तिम स्क्रिनशटमा देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले अनुप्रयोग खोल्नु पर्छ टिप्पणीहरू.
हामी आइकनमा छुन्छौं सेयर.
र अन्तमा, हामी मा छुन्छौं भिडियो बचत गर्नुहोस्। अब हामीसँग यो हाम्रो रिलमा हामीले के गर्न चाहन्छौं।
यस विधिको नकारात्मक पक्ष? ठीक छ, विधि वास्तवमा धेरै राम्रो छ, तर एप्लिकेसन नि: शुल्क हो र एकीकृत खरीदबिना नै छ, जसको अर्थ विकासकर्ताले अर्को तरिकामा फाइदाहरू लिन पर्छ। यी लाभहरू प्राप्त गर्ने राम्रो तरिका, प्रसिद्ध फ्लापी बर्ड गेमले देखाए जस्तै, विज्ञापन बेच्ने माध्यम हो। प्रत्येक सानो समय जब हामी टर्बो डाउनलोडर प्रयोग गर्छौं, हामी एक देख्नेछौं पप-अप विन्डो एक विज्ञापनको साथ जुन हामी seconds सेकेन्डमा छोड्न सक्छौं। सबै चीजको मूल्य हुन्छ र यो यो अनुप्रयोगको लागि यो हो
वैकल्पिक लिंक: टर्बो डाउनलोडर।
यो आईओएसमा मेरो मनपर्ने विधि हो। कार्यप्रवाह यो एक सशुल्क अनुप्रयोग हो, तर यो धेरै चीज गर्न प्रयोग गर्दछ, केहि एप्पल द्वारा प्रतिबन्धित। कार्यप्रवाहले हामीलाई अनुमति दिए, उदाहरणका लागि, रिट्वाप द्वारा रिलबाट फोटो पठाउन यो स्वभाविक रूपमा सम्भव हुनु भन्दा धेरै समय अघि। प्रतिबन्धको अर्को उदाहरण जुन हामीले कार्यप्रवाहको साथ हटाउँछौं त्यो हो कि हामी मेल मार्फत than भन्दा बढी फोटोहरू पठाउन सक्छौं। थप रूपमा, वर्कफ्लोको साथ हामी भिडियोहरूमा मात्र सीमित गर्दैनौं, तर हामी संगीत डाउनलोड गर्न पनि सक्छौं। अनुप्रयोग यसको लागि लायक छ र मैले यो पहिले नै खरीद गरिसकेको हुनाले, म यो प्रयोग गर्छु यदि म YouTube बाट कुनै सामग्री डाउनलोड गर्न चाहन्छु।
कार्यप्रवाहको साथ युट्यूब भिडियो र संगीत डाउनलोड गर्न प्रक्रिया धेरै सरल छ। यो मात्र आवेदन हुन आवश्यक छ र विस्तार आवश्यक हामीले लिनु पर्ने कदमहरू निम्न छन्:
तार्किक रूपमा, गर्न पहिलो कुरा अनुप्रयोग स्टोर मा जानुहोस् र वर्फ्लो डाउनलोड गर्नुहोस्.
कार्यप्रवाह पहिल्यै स्थापित संग, हामी सफारी खोल्छौं र हामी भिडियोमा नेभिगेट गर्दछौं जुन हामी डाउनलोड गर्न चाहन्छौं।
हामी मा खेले शेयरत्यसो भए थप र हामी रन वर्कफ्लो विकल्प सक्रिय गर्दछौं। यो चरण मात्र एक पटक गरिन्छ र सफारीमा प्रयोग गरिने अन्य कार्यप्रवाह विस्तारहरूको लागि मान्य हुनेछ।
हामी सेयर आइकनमा ट्याप गर्दछौं र छनौट गर्दछौं कार्यप्रवाह चलाउनुहोस्.
हामी विस्तार छनौट गर्दछौं YouTube बाट रिल सम्म (वा विस्तार) एमपी3मा युट्यूब यदि हामी केवल अडियो मात्र डाउनलोड गर्न चाहन्छौं)।
हामी कुर्छा। कार्यको अन्त्यमा, भिडियो रीलमा उपलब्ध हुनेछ।
यसको मूल्य के छ? केवल खराब चीज यो छ कि एप्लिकेसन भुक्तान गरिएको छ, तर यदि तपाइँले जानकारी हेर्नुभयो भने यो लिंक तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि यसको लागि यसको लायक छ।
यद्यपि अघिल्लो विधि नै मलाई सबैभन्दा मनपर्‍यो, मैले यो स्वीकार्नुपर्दछ कि यो धेरै चोटि असफल हुन्छ, तर यो यूट्यूब वेबसाइटमा केहि अनौंठो हुने बेलामा हुनुपर्दछ। के सामान्यतया असफल हुँदैन "एसएस विधि" हो, तर आईओएस सफारी नेटिभ फाईलहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिदैन। त्यसोभए हामी के गर्छौं युट्युब.कमको अगाडि दुईका थप थप्नुहोस्, इन्ट्रोमा हिट गर्नुहोस् र वेबमा जानुहोस्। त्यसो भए हामी डाउनलोडमा क्लिक गर्दछौं, जुन हामीलाई वेबमा लगिन्छ जुन नेटिभ सफारी प्लेयरसँग पुन: उत्पादन हुन्छ। त्यस बिन्दुमा हामीले अर्को विस्तार सुरू गर्नुपर्नेछ जुन मैले यस अवसरको लागि सिर्जना गरेको छु। भिडियो रीलमा डाउनलोड हुनेछ। प्रश्नमा एक्स्टेन्सन डाउनलोड गर्न तपाईले ट्याप गर्नु पर्छ यो लिंक तपाईको आईफोनबाट
वैकल्पिक लिंक: कार्यप्रवाह.
यदि तपाईं धेरै अनलाइन डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई Amerigo चलाउनको लागि रुचि हुन सक्छ। यो यस्तो होइन कि यो सस्तो अनुप्रयोग हो, तर यसले हामीलाई व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ। Amerigo को साथ भिडियो डाउनलोड गर्न प्रक्रिया धेरै सरल छ। हामीले भर्खरै गर्न पर्छ:
हामी Amerigo खोल्छौं।
हामी डाउनलोड गर्न चाहेको भिडियोमा नेभिगेट गर्दछौं।
यदि यो स्वचालित रूपमा प्ले हुँदैन भने हामी त्रिकोणमा छुन्छौं (प्ले)।
तपाईंले यी लाइनहरू माथि केन्द्रीय स्क्रीनशटमा देख्नुहुने विन्डो देखा पर्नेछ। हामी तल एरो (डाउनलोड) मा ट्याप गर्दछौं।
अर्को हामी चाहेको भिडियो मा छुन्छौं र त्यसपछि "फाइलहरूमा देखाउनुहोस्" मा।
अन्तमा हामी दुई तल्लो एर्रोमा छुन्छौं र हामी रिलमा सेभ छुन्छौं। खैर, पहिलो भिडियो मैले गरेको परीक्षणहरू मध्ये एक हो।
वैकल्पिक लिंक: अमेरिगो
ब्राउजरबाट यूट्यूब भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने
एसएस थप्नको विधि
यस लेखमा देखापर्ने सबै चीज जत्तिकै सरल लाग्न सक्छ, सबै कुरा अझै सरल र हाम्रो कम्प्युटरमा सफ्टवेयर स्थापना नगरीकन हुन सक्छ, प्रणालीको लोडिंगमा जहिले समाप्त हुन्छ। गर्न सकिन्छ सीधा ब्राउजरबाट र त्यहाँ विकल्पहरू छन् जुन यति सरल छन् कि हामी उनीहरूलाई कसरी बाँच्न सक्छौं भनेर हामी बुझ्न सक्दैनौं। मैले व्याख्या गर्न गइरहेको विकल्प सम्झनको लागि राम्रो छ, किनकि हामी यसलाई कुनै पनि ब्राउजरमा व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं।
जहाँसम्म म सचेत छु कि त्यहाँ अन्य वेब पृष्ठहरू छन् जसले हामीलाई ब्राउजरबाट यूट्यूब सामग्री डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ, म यो विधि सिफारिस गर्दछु। हामी निम्न कार्य गर्दछौं:
सधैं जस्तो, हामी वेब ब्राउजर खोल्छौं र इच्छित भिडियोमा जान्छौं।
हामीले युआरएलको प्रतिलिपि गर्न वा यसलाई कुनै प्रोग्राममा टाँस्न आवश्यक पर्दैन। हामीले के गर्नु पर्छ दुई इसेस (हरू) अगाडि «यूट्यूब» राख्नु पर्छ। यो यस्तो देखिनु पर्छ (रातो फ्रेममा हामीले के हाल्ने छ)। https://www.ssyoutube.com/watch?v=3rFoGVkZ29w
हामी बाँकी यूआरएललाई त्यस्तै छोड्छौं। त्यसो भए हामी इन्टर कुञ्जी थिच्दछौं र तपाईले के हुन्छ देख्नुहुनेछ।
यो तपाईं पृष्ठ मा ले जस्तै एक तपाईं अघिल्लो स्क्रीनशट मा देख्नुहुनेछ। अब हामी केवल सीधा डाउनलोड द्वारा भिडियो डाउनलोड गर्न को लागी हो। वा, यदि हामी अडियो मात्र डाउनलोड गर्न चाहन्छौं भने ड्रप-डाउन मेनूबाट त्यो विकल्प छनौट गर्नुहोस्। सजिलो, सही?
यस विकल्पको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो कुनै पनि ब्राउजरमा काम गर्दछ जसले तपाईंलाई फाइलहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। यो केवल महान छ।
अन्य समान विधिहरू
SaveFrom.net अन्य पृष्ठहरूबाट डाउनलोड गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि हामी वेबबाट कुनै पनि फाईल डाउनलोड गर्न चाहन्छौं भने हामी जहिले पनि sfrom.net/ जोड्न को लागी URL को http: // को अगाडि देखाउन सक्दछौं। यदि youtube.com को अगाडि दुई s लाई थप्नुको सट्टा हामीले sfrom.net/ सबैको अगाडि थप्छौं भने, यसले हामीलाई उही वेबसाइटमा लैजान्छ।
तर, जसरी हामीले पहिले र .avi लाई सिधा डाउनलोडको सेक्सनमा वर्णन गरिसकेका छौं, यो youtube.com वा "lataa" अगाडि "dlv" थपेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
पूर्ण HD वा KK मा कसरी YouTube भिडियो डाउनलोड गर्ने
4K भिडियो डाउनलोडरको साथ
यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्न एक धेरै चाखलाग्दो विकल्प किनभने यो बहु प्लेटफार्म हो 4K भिडियो डाउनलोडर। यो सानो तर शक्तिशाली कार्यक्रमले हामीलाई अनुमति दिनेछ:
अघिल्लो YouTube प्लेलिस्टहरू र च्यानलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई MP4, MKV, M4A, MP3, FLV, 3G ढाँचाहरूमा रेकर्ड गर्न सक्षम भई र .M3U ढाँचामा प्लेलिस्टहरू उत्पन्न गर्ने सम्भावनाको साथ।
डाउनलोड गर्नुहोस् HD भिडियोहरू १p० पी, एचडी p२० पी वा। के रेजोलुसनमा टेलिभिजनमा सामग्रीको मजा लिन कुनै गुणवत्ता बिना।
भिडियोमा एकीकृत उपशीर्षकहरू डाउनलोड गर्न वा एक .srt फाईलमा छुट्टै डाउनलोड गर्ने सम्भाव्यता।
3 डी ढाँचामा भिडियो डाउनलोड गर्ने सम्भाव्यता। यो हाम्रो थ्रीडी टेलिभिजनमा भिडियोहरूको आनन्द लिन रोचक छ। तार्किक रूपमा, यो बेकार छ यदि हामीसँग पुन: उत्पादन गर्न कहिँ छैन।
कुनै पनि वेब पृष्ठबाट इम्बेडेड यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्, मात्र यसको लिंक प्रतिलिपि गरेर र अनुप्रयोगमा टाँस्नुहोस्।
Vimeo, साउन्डक्लाउड, फ्लिकर, फेसबुक र डेली मोशनबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
4K मा यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्दै
4K भिडियो डाउनलोडरको साथ भिडियो डाउनलोड गर्न सजिलो हुन सकेन। हामीले केवल निम्न गर्नुपर्नेछ:
हामी युआरएलको प्रतिलिपि गर्छौं हाम्रो वेब ब्राउजर बाट भिडियो को।
हामी क्लिक गर्दछौं लिंक टाँस्नुहोस्।
हामी ढाँचा छनौट गर्दछौं इच्छित
हामी क्लिक गर्दछौं डाउनलोड गर्नुहोस्.
तार्किक रूपमा, भिडियो 4K मा डाउनलोड गर्नका लागि, भिडियो त्यो रिजोलुसनमा अपलोड गरिएको हुनुपर्दछ। यदि यो केस हैन भने हामी यसलाई KK मा डाउनलोड गर्न सक्षम छैनौं।
तर यदि हामी यो अझ सरल भएको चाहन्छौं भने हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछौं स्मार्ट मोड। यदि हामीले स्मार्ट मोड सक्रिय गर्नुभयो भने डाउनलोडहरू केवल एक क्लिकमा टाढा हुने छन्। जब हामी स्माइली अनुहारमा क्लिक गर्दछौं, एक विन्डो देखा पर्नेछ जुन यस मोडले कसरी काम गर्दछ हामीलाई सूचित गर्दै। यस विन्डोमा हामी कुन गुणस्तरका साथ हामी तपाइँ भिडियोहरू डाउनलोड गर्न चाहन्छौं भन्ने पनि सूचित गर्दछ। यदि हामी तिनीहरूलाई मेनूमा उच्च गुणवत्ताको साथ चाहन्छौं क्यालिडाड हामीले छनौट गर्नु पर्छ मूल। यदि भिडियो K के रिजोलुसनमा उपलब्ध छ, प्रोग्रामले हामीलाई यसलाई K केके गुणवत्तामा डाउनलोड गर्नेछ। सजिलो, सही?
4K डाउनलोडरको बारेमा नराम्रो कुरा हो? ठिक छ, तपाईं अघिल्लो छवि मा देख्न सक्नुहुन्छ, यो विज्ञापन समावेश गर्दछ। तर, हामी जहिले सँधै भन्छौं, सबै चीजको मूल्य हुन्छ र यो K के डाउनलोडर हो।
.Ii ढाँचामा सिधा YouTube भिडियो डाउनलोड गर्ने
Youtube.com को अगाडि "lataa" थप्दै
यो विधि व्यावहारिक रूपमा "ss" वा "dlv" थप्ने जस्ता समान छ। हामीले केवल निम्न गर्नुपर्नेछ:
सँधै, हामी ब्राउजर खोल्छौं र हामी डाउनलोड गर्न चाहेको भिडियोमा जान्छौं।
एउटा सन्देश देखा पर्नेछ जुन वेब सुरक्षित छैन। यदि तपाईं कुनै जोखिम लिन चाहनुहुन्न भने, पढ्ने नगर्नुहोस्। मलाई लाग्छ कि यो वेबको भाषासँग गर्नुपर्दछ, जुन प्रतीकहरू छन् जुन ब्राउजरले राम्ररी बुझ्दैन। यदि तपाईं डराउनुभएन भने, अगाडि बढ्नुहोस्, एलिसन्टे जस्ता।
LataYouTube.com पृष्ठमा, हामीले तीन क्लिकहरू गर्नुपर्नेछ, जस मध्ये पहिलो «Laatu» मेनू प्रदर्शन गर्न को लागी हामीले चाहेको भिडियो / अडियो ढाँचा छनौट गर्न सक्दछौं।
मेनू जुन हामीलाई यो सेक्सनमा रुचि दिन्छ, दोस्रो हो, "Valitse muoto"। हामीले choose AVI choose छान्नु पर्ने यो स्थान यही हो।
र अन्तमा हामी लतामा क्लिक गर्दछौं। यो रूपान्तरण गर्न सुरु हुनेछ।
जब रूपान्तरण समाप्त हुन्छ, डाउनलोड विन्डो स्वत: देखा पर्नेछ। तपाईं शान्त हुन सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिएको फाईल एक .avi हो, कुनै अनौंठो एक्जिक्युटेबल वा त्यस्तो केहि छैन।
एक YouTube भिडियो बाट एक एमपी3डाउनलोड गर्न को लागी
Youtube.com को अगाडि एसएस थप्ने विधि जत्तिकै सजिलो छ जुन हामीले माथि वर्णन गर्यौं VidToMP3 पृष्ठ र अधिक वा कम समान गर्नुहोस्। केवल भिन्नता यो हो कि, अक्षरहरू प्रविष्टि गर्नुको सट्टा वेबमा जानुहोस्, हामी पृष्ठमा मैन्युअल्ली जानुपर्नेछ किनकि हामी कुनै अन्य वेब पृष्ठ पहुँच गर्न सक्दछौं। हामीले केवल वेबमा जानुपर्नेछ जुन म तपाईंलाई पछि राख्नेछु र निम्न कार्यहरू गर्नुहोस्:
हामीले युआरएल टाँस्यौं बक्समा भिडियोको।
हामी "मा क्लिक गर्दछौंडाउनलोड"। त्यसोभए यसले एक प्रतिशत देखाउन सुरू गर्दछ, उपकरणले अडियो निकाल्दैछ र डाउनलोडका लागि फाइल तयार गर्दैछ, जब प्रतिशत पूरा हुन्छ यसले तपाईंलाई सूचित गर्दछ रूपान्तरण सम्पन्न भएको छ। तेसैले, हामी कुर्छा रूपान्तरण समाप्त गर्न को लागी।
अर्को विन्डोमा, हामी "तपाईंको डाउनलोड लिंक प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्"।
त्यसपछि बक्स अनचेक गर्नुहोस् र हामी "मा क्लिक गर्दछौंएमपी Download डाउनलोड गर्नुहोस्"।
यो पनि एक सरल विधि हो, हैन? कुरा यो हो कि यो मेरो मनपर्ने पनि होइन। यस लेखमा विस्तृत व्यक्तिहरू जस्ता प्रोग्रामहरूको साथ, यो विकल्प होईन जुन म विचार गर्दछु। निस्सन्देह, यो उत्तम हो यदि हामी के चाहन्छौं एमपी3मा अडियो डाउनलोड गर्न। यदि हामी वेबसाईट मार्फत गर्दैनौं VidToMP3धेरै अवसरहरूमा हामीसँग अडियो मात्र उपलब्ध हुनेछ, उदाहरणका लागि, M4V ढाँचा। यो ध्यानमा राख्नु पर्छ।
मलाई लाग्छ कि सबै छ। यस लेखमा तपाईंले युट्यूबबाट भिडियो र अडियो डाउनलोड गर्नका लागि राम्रो विकल्पहरू वर्णन गर्नुभयो र व्यावहारिक रूपमा सबै अपरेटि operating प्रणालीहरूको लागि वा असफल भएमा, त्यहाँ प्रणालीहरू छन् जुन यहाँ वर्णन गरिएको छैन। के तपाईंसँग केहि राम्रो सुझावहरू छन् जुन यस सूचीलाई बनाउन सक्दछ? यदि तपाईं अधिक चाहानुहुन्छ भने, स्वतन्त्रता यो पनि विचार गर्न एक अर्को विकल्प हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » कसरी YouTube भिडियोहरू र संगीत डाउनलोड गर्ने: सबै तपाईंले जान्नु आवश्यक छ
मोर्ड EL Azzouzi भन्यो
यो मलाई सजिलो देखिन्छ भनेर अर्को तरिका छ, तपाईं डाउनलोड गर्न चाहानु भएको युट्यूब भिडियो खोल्नुहोस् र URL dl add थप गर्नुहोस् युट्यूब यूआरएलको अगाडि र तपाईं गुणवत्ता छनौट र डाउनलोड गर्न विकल्प देख्नुहुनेछ, तपाईं पनि mp3 को रूपमा डाउनलोड गर्न विकल्प हुनेछ। अडियो 😉
Mord EL Azzouzi लाई जवाफ दिनुहोस्